Fikarohana momba ny firaisana Nobel Laureate Kary Mullis, izay namorona PCR (Fototry ny fanoratana ny rantsan-tànan'ny ADN), dia nanohana fa izy dia Benjamin Rush tamin'ny fiainana taloha ary ny vadiny, Nancy, dia Julia Rush: Fitiavana manerana ny nofo roa - Fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Reincarnation sy ny Sequencing DNA
Tamin'ny taona 2000 dia nanao fikarohana aho mety ho lasa fiainako taloha izay no nahatonga ahy tany Boston nandritra ny Revolisiona Amerikana. Tao anatin'izany fomba izany, rehefa namantatra ny lalao tamin'ny lasa aho dia nanamarika fa ny endrika ivelany, ny talenta ary ny toetran'ny toetra dia toa mijanona hatrany amin'ny fiainana iray ka hatramin'ny iray hafa. Ankoatr'izay, tsikaritro fa ny olona dia miforona indray ao anaty vondrona fanahy mba hiaraka indray amin'ireo olon-tiany, fantatra na niara-niasa tamin'ny fiainany taloha.
Nandritra io fotoana io dia nanontany tena aho raha mety hanisy ampahany amin'ny ADN ao amintsika ny fanahy, izay azo ampiasaina hanaporofoana ny fanambadiana amin'ny laoniny amin'ny alàlan'ny fomba biokimika. Tsy tafiditra ao anatin'izany ny teknikan'ny fanaovana pirinty ADN nentim-paharazana, izay mifototra amin'ny fototarazon'ny fianakaviana.
Fa ny eritreritra dia ny mampitaha ny filaharan'ny ADN avy amin'ny fahatongavana ho iray hafa hahitana raha misy fizarana ADN izay tokana ho an'ny fanahy tsirairay. Ny ADN nosoratan'ny fanahy, izay mijanona hatrany amin'ny androm-piainany ka hatramin'ny iray hafa, dia mety ho ao anaty antsoina hoe "ADDRANJOKA" izay tsy misy tanjona fantatra amin'ny vatan'olombelona.
Kary Mullis sy Polymerase Chain Reaction (PCR): Vaovao Vaovao amin'ny Siansa
Tamin'ny Aogositra 2000 dia nianatra momba ny mpikaroka ao amin'ny Smithsonian Institute aho izay manana fahaiza-manao amin'ny fitiliana ny ADN, ary ny Terry Sharrer no anarany. Nifandray taminy tamin'ny telefaona aho hahazoana fanazavana momba ny fizahana ADN. Tadidio fa tamin'ny taona 2000 dia nanomboka nanomboka ny Internet ary tsy nisy ny Google. Raha te hahalala vaovao amin'izany fotoana izany dia mila mitodika amin'ireo boky na olombelona ny olona iray.
Nandritra ny resadresaka nataoko dia notantaraiko taminy ny fahalianako amin'ny reincarnation sy ny lohahevitra ara-panahy hafa. Teraka be i Terry avy eo ary nilaza fa tokony hifandray amin'ny namany aho, Kary Mullis, biochemist izay namorona ny fanehoan-kevitra simika izay ampiasaina amin'ny fanondron-tanana ADN, izay antsoina hoe Polymerase Chain Reaction (PCR). Nizara i Terry avy eo fa i Kary dia nahazo ny loka Nobel noho ny fitrandrahana ity.
PCR dia maneho ny fahatapahana lehibe amin'ny biolojia sy ny fitsaboana, satria nandroso tamin'ny andron'ny ADN. PCR no fototry ny sarimihetsika sarimihetsika Jurassic Park, izay hita ny ADD dinosaur taloha, voatahiry ary ny PCR dia ampiasaina hamerenana ny ADN mba hanangana ny dinosaurs.
Raha ny tena izy, zava-dehibe ny famoronana PCR ka ny mpahay siansa sasany dia manambara fa ny sehatry ny biolojia sy ny fitsaboana dia azo zaraina roa eras, ny iray alohan'ny PCR ary ny iray aorian'ny PCR.
Fanahy Arabo: Fifandraisan'ny fiainana taloha? Benjamin Rush?
Taorian'ny nizaraako izay mahasoa ahy ara-panahy dia hoy i Terry: "ianareo roa dia mpianakavin'ny mpianakavy."
Nomeny ahy avy eo ny nomeraon-telefaona sy ny adiresin'i Kary Mullis. Nanoro hevitra i Terry fa alohan'ny hifandraisana aminy dia tokony hamaky boky autobiografika izay nosoratan'i Kary aho Mandihy miboridana eo amin'ny sehatry ny saina.
Somary somary taitra kely aho satria nomena ny nomeraon-telefaona sy adiresin'ny Nobel Laureate izay namorona fanehoan-kevitra simika nanova ny tontolo taorian'ny fifampiresahana an-telefaona niaraka tamin'i Terry.
Rehefa namono ny telefaona aho dia nisaintsaina raha anisan'ny vondrona fanahiko i Kary tamin'ny vanim-potoanan'ny Revolisiona Amerikanina, satria ny fifandraisana taminy dia natao haingana sy mora tokoa. Rehefa nisaintsaina ny zava-nitranga vao lasa aho ary nanontany tena hoe iza i Kary, nisy anarana iray tonga tao an-tsaiko:
Dokotera, simika ary tia tanindrazana i Rush nandritra ny Revolisiona Amerikana. Namana niaraka tamin'i John Adams sy Thomas Jefferson izy ary raha ny marina dia nanoratra fa ireo Rainy Mpanorina roa ireo dia ny tsipika avaratra sy atsimo amin'ny Revolisiona Amerikanina. Rush dia ilay dokotera nanao fandidiana ny zanakavavin'i John Adams tao an-tranon'izy ireo tao Braintree, Massachusetts, izay voan'ny kansera amin'ny nono (maty izy taty aoriana).
Nahaliana ahy, tamin'ny fantatro ny fiainako taloha, dia nahafantatra an'i Benjamin Rush.
Kary Mullis dia mino ny Reincarnation ary afaka mahita ny maty izy
Rehefa namaky ny bokin'i Kary aho dia takatro ny antony nilazan'i Terry tamiko fa mpihavana izahay sy Kary. Ankoatry ny fananana asa amin'ny siansa, samy nanana ny fahalianany tamin'ny ara-panahy sy ny vatana vaovao indray. Namarana ny bokiny tamin'ity teny nalaina ity aza i Kary:
"Ny fihetsika mety amin'ny zanak'olombelona dia ny mahatsapa vintana fa velona ary manetry tena manoloana ny halehiben'ny zavatra ary manana labiera. Mitonia. Tongasoa eto an-tany. Somary misavoritaka ihany aloha. Izany no antony tsy maintsy miverimberina miverimberina alohan'ny hianaranao mankafy ny tenanao. ”
Ankoatr'izany, amin'ny Mandihy miboridana eo amin'ny sehatry ny saina, Mizara traikefa an-kolaka niainany i Kary rehefa maty ny raibeny, izay nantsoina hoe "Pop". Notantarainy fa ny raibeny dia maty tany North Carolina raha mbola nipetraka tany avaratr'i Kalifornia i Kary. Nambaran'i Kary fa talohan'ny nampandrenesan'ny olona azy momba ny fahafatesan'ny raibeny dia niseho tao an-tranony ny fanahin'ny raibeny. Nizara i Kary fa ny fanahin'i Pop dia nijanona tao an-tranony nandritra ny roa andro talohan'ny nialany.
Ny talenta amin'ny fiainana taloha, ny toetran'ny toetra manokana ary ny endri-batana ara-batana, ary koa ny fomba fanoratra mitovitovy amin'ny androm-piainana iray
Rehefa namaky momba an'i Benjamin Rush sy i Kary Mullis aho dia nahita fampitoviana be. Samy nitazona ny mpahay siansa tamin'ny androny izy ireo ary samy manana ny toetra maha-iconoclastic sy mpikomy. Nahatsikaritra ihany koa aho fa ny rafitry ny autobiografika Kary dia mitovy amin'ny iray nosoratan'i Rush mitondra ny lohateny.
Ohatra, mitondra ny lohateny hoe "autobiography" Rush Nandehandeha tamin'ny fotoana, raha ny anaram-boninahitr'i Kary Mandihy miboridana eo amin'ny sehatry ny saina. Mariho fa ny lohateny roa dia manomboka amin'ny teny fihetsika, "Travel" ary "dihy", ary ny hetsika dia mitranga amin'ny endrika tsy miovaova, "Fotoana" sy ny «Mind field». Mba hahalalana ireo fitoviana fanampiny, azafady jereo ny bokiko Fiverenan'ny revolisionera.
Raharaha reincarnation iray izay nanaovana ny famakafakana ny fiteny izay mampiseho fomba fanoratra mitovitovy amin'ny androm-piainana roa:
Tsikaritro ihany koa fa i Benjamin Rush sy i Kary Mullis dia manana endrika tsy miova.
Kary Mullis dia manohana fa i Benjamin Rush dia tamin'ny androm-piainany taloha
Nandefa fonosana ho an'i Kary aho ary nohazavaiko fa nieritreritra aho fa izy no reincarnation an'i Benjamin Rush ary nifankahalala izahay nandritra ny vanim-potoanan'ny Revolisiona Amerikanina.
Taty aoriana, tamin'ny faran'ny taona 2001, rehefa avy nampanantenaina fifanekena boky nataon'ny orinasa mpamoaka boky aho, Hampton Roads, dia nifandray tamin'i Kary aho ary nanontany raha afaka hampiditra azy ao amin'ny boky ho avy aho.
Tena gaga be aho rehefa niantso ahy i Kary ary nanaiky hiatrika azy Ny famerenan'ny revolisiona. Nanaiky ny hanana ny vadiny, Nancy, haka sary azy ho fampitahana sary izy.
Rehefa nifampiresaka tamin'i Nancy Mullis mikasika ny sarin'i Kary aho, dia niseho tamiko fa izy angamba i Julia Rush, vadin'i Benjamin Rush. Misy porofo marim-pototra fa afaka manambatra ny fanambadiana indray ny fanambadiana. Raha te hahalala bebe kokoa, azafady, mandehana:
Twin Study izay notarihan'i Ian Stevenson, MD avy ao amin'ny University of Virginia
Fifandraisan'ny fiainana taloha: Nancy Mullis ho Reincarnation an'i Julia Rush
Rehefa avy nizara aho fa izy angamba dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Julia Rush, nandefa sary azy avy hatrany i Nancy, na dia tsapako avy eo fa mbola tsy nahita sarin'i Julia Rush aho ary tsy fantatro raha nisy akory. Soa ihany fa misy sarin'i Julia Rush hita ary hitako fa nitovy endrika tamin'ny tarehiny i Nancy sy Julia.
Farany, nahatsapa i Kary sy Nancy fa manan-kery ny raharahan'ny reincarnation andefasana azy ary nanao sonia fifanarahana voasoratra izy ireo. Fiverenan'ny revolisionera. Feno fankasitrahana aho fa ity mpahay siansa malaza eran'izao tontolo izao sy i Nobel Laureate dia niaraka tamiko, na dia fantatray aza fa mety handratra ny lazany izany. Raha oharina amin'i Kary dia tsy olona aho. Na dia nahavita mari-pahaizana ambony amin'ny siansa aza aho tamin'ny fotoana tsy navoakako ary tsy fantatro. Izaho koa mankasitraka an'i Nancy Mullis, izay nanampy tamin'ny fanamorana izany.
Maty i Kary Mullis tamin'ny taona 2019. Nandritra ny asa famaranana farany dia nanolo-tanana ahy i Kary tamin'ny taona 2017 mba hanehoana ny fitoviana eo amin'i Benjamin Rush sy ny tenany.
Raha hijery ireo tranga taloha, dia mankanesa any:
Fitsaboana Reincarnation amin'ny fitsaboana sy ny psikology
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endrik'i Benjamin Rush | Kary Mullis, ary koa ireo an'i Julia Rush | Nancy Mullis, lalao. Tranga reincarnation izay mampiseho fatratra fa ny fiasa amin'ny tarehy dia afaka mijanona ho iray hatramin'ny androm-piainany iray hafa dia omena etsy ambany:
Raharaha fanalefahana ny mpiady WW II Pilot James Huston, Jr. | James Leininger
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Benjamin Rush dia simia sady mpitsabo malaza tamin'ny fotoan'ny Revolisiona Amerikana, raha toa kosa i Kary Mullis namorona PCR, izay nanova an'izao tontolo izao ara-bakiteny. Rush sy Mullis koa dia naneho toetra mitovy amin'izany amin'ny fikomiana sy iconoclastic.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Nihaodivily indray i Benjamin sy Julia Rush ho Kary sy Nancy Mullis ho lasa mpivady indray.
Araka ny voalaza, nifototra tamin'ny fiainako teo alohan'ny fikasaziana teo aloha, nahafantatra an'i Benjamin Rush aho nandritra ny vanim-potoanan'ny Revolisiona Amerikanina, ka izany no antony inoako fa niara-nihaona i Kary sy tamin'ny vanimpotoana ankehitriny.